မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် သရဲ (မကြောက်တတ်သူများသာ ၀င်ဖတ်ပါ)
သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် သရဲ (မကြောက်တတ်သူများသာ ၀င်ဖတ်ပါ)
ဒီကောင့် နာမည်က "ဇော်ကြီး"… မူကြိုစတက်ကတည်းက တွဲလာတာ ဆယ်တန်းထိကို အတူတူပဲ..။ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်လိုက်ကြတာလည်း အရမ်းပဲ .. သူ့အိမ် ကိုယ်အိပ်.. ကိုယ့်အိမ် သူအိပ်.. နေကြတာ..။ အ၀တ်အစားတွေ အသုံးအဆောင်တွေကအစ.. သူ့ဟာ ကိုယ့်ဟာ မခွဲဘဲ ပေါင်းဝတ်ကြတာပေါ့ ဗျာ..။ ဒီကောင်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ၀ါသနာလည်း အတော်တူတယ်ဗျ..။ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံး အတူကန် တယ်..။ ဘောလုံးဂိမ်း အတူဆော့တယ်..။ ဘောလုံးပွဲ အတူကြည့်တယ်..။ ကြိုက်တဲ့ အသင်းကလည်း အတူတူပဲ..။ မန်ယူမှ မန်ယူတွေ….။ အကျင့်တူတဲ့ သူနှစ်ယောက် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေကြတာ သိပ်ဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ..။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘောလုံးအသင်းရှိတယ်ဗျ..။ တစ်နှစ်တစ်ခါ မြို့နယ်အနေနဲ့ ရပ်ကွက်ပွဲတွေ လုပ်ပေးတယ်..။ ဒီကောင်ရယ် ကျွန်တော်ရယ်က ရပ်ကွက် အသင်းမှာ နှစ်တိုင်းမပါမဖြစ်။ ဒီကောင် ဆော့တာက အရှေ့။ ကျွန်တော်က အလယ်..။ မြို့ကလူတွေတော်တော်များများ ကျွန်တော်တို့အသင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို တွဲမြင်ကြတယ်..။ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က အမြဲတမ်း တစ်သင်းထဲမှာပဲကစားတယ်..။ ချိန်းပွဲတွေမှာတောင် ခွဲမကန်ဖူးဘူး..။ သူမရှိရင် ကျွန်တော် မဆော့တတ်တော့သလို… ကျွန်တော်မရှိရင် သူလည်း ကွင်းထဲမှာ ငပေါကြီးကို ဖြစ်သွားရော..။ အဲ့ဒီလောက်တွဲလာကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်။
တစ်ရက်… ဒီကောင်က ကျွန်တော့်ကို တောင်နောက်ချောင်းရေသွားကူးဖို့ လာခေါ်တယ်ဗျ..။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီနေ့က နေမကောင်းတာနဲ့ မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ ဒီကောင်လည်း ကျွန်တော့်ကို အတင်းမခေါ်တော့ပဲ ထွက်သွားတယ်..။
နောက်တစ်ရက်… ဇော်ကြီး ဆုံးသွားပြီတဲ့..။ ကိုယ့်နားကိုယ်တောင် မယုံဘူး..။ တောင်နောက်ချောင်းမှာ ရေနစ်ပြီး ဆုံးတာတဲ့..။ အလောင်းက ဆေးရုံက ရေခဲတိုက်မှာ ရောက်နေပြီ..။ မနေ့က သူ့အိမ်နဲ့ စကားများ ပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အိမ်ကထွက်သွားတယ်တဲ့..။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ၀င်ခေါ်တာ..။ ကျွန်တော်လည်း မလိုက်တော့ ဘီယာသောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း တောင်နောက်ချောင်းမှာ ရေသွားကူးတာ မူးမူးနဲ့ဆိုတော့ ရေနစ်ပြီး ဆုံးသွားတယ်လို့ သူ့အိမ်က ပြန်ပြောပြတယ်..။
ကျွန်တော် ဒီကောင့် အလောင်းကို ရင်ခွဲရုံမှာ သွားကြည့်တော့ ပိတ်ဖြူအုပ်ထားတဲ့ အလောင်းကို မြင်ရတယ်..။ ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းပါ..။ ရုပ်လေး ကြည့်ပါရစေလို့ အစောင့်ကို ခွင့်တောင်းတော့…. အစောင့်က ကျွန်တော့်ကို ပိတ်ဖြူလေး လှန်ပြတယ်…။ အရင်က နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇော်ကြီး မျက်နှာက ရေတွေနဲ့ဖောင်းပွနေပြီး ပေါက်ထွက်တော့မယ် ရေအိတ်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်…။ မျက်လုံးနဲ့ နှာခေါင်း ပါးစပ်ထဲမှာ သဲတွေ ပြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်..။ ပိတ်ဖြူအောက်က ထိုးထွက်နေတဲ့ ဗိုက်ပူပူကို မြင်ရတာ လည်း သူ့ဗိုက်ထဲ ရေတွေ ဘယ်လောက်တောင် ၀င်ထားသလဲဆိုတာ သိတာတယ်..။ ကျွန်တော် ဆက်ကြည့် နိုင်စွမ်း မရှိတာနဲ့ မျက်နှာလွဲပြီး ထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်..။
မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီအချိန်က ဘောလုံးပွဲကန်နေတဲ့အချိန်ကြီး တစ်ပွဲကန်ပြီး နောက်တစ်ပွဲကန်ဖို့ စောင့်နေရတဲ့ အချိန်..။ ကျွန်တော် ဇော်ကြီးရဲ့ အသုဘကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးခဲ့တယ်..။ အချိန်ပြည့် သူတို့အိမ်မှာပဲ နေပေပြီး ဝေယျာဝစ္စတွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တယ်..။ အရာအားလုံး အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ ပါပဲ..။ အဲ… ထုံးစံ အတိုင်း နောက်ဆုံး ရက်လည် နေ့မှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပါပဲ..။ အဲ့ဒီနေ့က သေဆုံးသူက ဆွေမျိုး အပေါင်းအပါတွေကို နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့ နေ့တစ်နေ့လေ..။
မနက် ပိုင်း တရားနာ၊ ဆွမ်းကပ်ပြီး တရားနာလာတဲ့သူတွေကို ဒံပေါက်ကျွေးဖို့ ကူညီနေရတာနဲ့ မနက်တစ်ပိုင်းလုံး ဘယ်လို ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး..။ နေ့လည် နှစ်နာရီလောက်ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ နယ်မြေမှူးက ကျွန်တော့်ကို မနက်ဖြန် ဘောလုံးပွဲရှိတယ်ဆိုတယ် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လာပြောတယ်..။ ကျွန်တော် တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်..။ ပထမဆုံး ဇော်ကြီး မပါတဲ့ဘောလုံးပွဲကို ကျွန်တော် ကန်ရတော့မယ်ပေါ့..။
ညအိပ်ယာ စောစောဝင်ခဲ့တယ်..။ ဒါမှ မနက်ဖြန် ဘောလုံးကန်ဖို့အားပြည့်နေမှာလေ..။ ဇော်ကြီးကို သတိရနေ မိတယ်..။ အရင်အချိန်တွေဆို မနက်ဖြန်လို ဘောလုံးကန်မယ်ဆို ဒီလိုညမှာ ဒီကောင်က အိမ်မှာလာအိပ်နေကျ။ မင်းဘယ်လိုကန် ငါဘယ်လိုကန်ဆိုပြီး လေပစ်နေတာနဲ့ ညကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့တာ..။ အခု တော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း..။ စိတ်က ဒီကောင့်ဆီကို ရောက်နေတာနဲ့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်…..။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ။ ကြိုးစားပြီး အိပ်မှပါလေ ဆိုပြီး စိတ်တင်းပြီး အိပ်ဖို့ ညာဘက်ကို စောင်း အိပ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော် အိပ်ယာဝင်ရင် ညာဘက်ကိုစောင်းပြီး အိပ်လေ့ရှိတယ်..။ အဲ့ဒါက အကျင့်ဖြစ်နေပြီး အဲ့ဒီလိုမှ မအိပ်ရင် မအိပ်ပျော်တော့ဘူး..။ အိပ်မပျော် တပျော် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကျောဘက်ကနေ အသက်ရှုသံ တစ်သံ ကြားနေရတယ်..။ ကျွန်တော် ကိုယ့်အသက်ရှုသံ ကိုယ်ပြန်ကြားတာများလားဆိုပြီး အသက်ခဏအောင့်ပြီး နားထောင် လိုက်တယ်..။ နောက်က အသက်ရှုသံက မရပ်သွားဘူး..။ သေပြီ..။ ဇော်ကြီး ကျွန်တော့် အိပ်ယာမှာ လာအိပ်နေပြီ.။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး..။ ကျွန်တော် မျက်လုံ့း မဖွင့်ပဲ အသက်ကို အောင့်ထားရာ ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှုလိုက်တယ်..။
လူတစ်ကိုယ်လုံး ကြောက်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချွေးတွေကြောင့် စိုရွှဲနေပြီ..။ နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ယောက်ျားပဲ ဆိုပြီး ဆတ်ကနဲ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့ နှာခေါင်းချင်း ကပ်လျက်အနေအထားမှာပဲ ရေခဲတိုက်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဇော်ကြီးမျက်နှာကြီး နီးကပ်စွာမြင်လိုက်ရတယ်..။ ဒီကောင့်မျက်နှာကြီးက ပြုံးနေသလိုပဲ…။ ပြီးတော့ ဒီကောင်က ကျွန်တော် ဘေးနားမှာ ကပ်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ အိပ်နေတာ…။ ကျွန်တော် လိပ်ပြာ လွင့်မတတ်ပါပဲ..။ ရှိသမျှ အသံနဲ့ အသားကုန် ကြုံးအော်လိုက်တယ်..။
"သားကြီး.. ဘာဖြစ်တာလဲ… တံခါးဖွင့်စမ်း.."
အိမ်က လူတွေက အပြင်ကနေ တံခါးထုနေသံကြားတော့ ကျွန်တော် အားရှိသွားတယ်..။ ကုတင်ပေါ်က ကုန်းရုံးထပြီး တံခါးပြေးဖွင့်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ်..။ တံခါးဖွင့်ဖို့ လုပ်တုန်းမှာပဲ အမှောင်ထဲမှာ ကုတင်ပေါ်ကနေ ဇော်ကြီး ကုန်းထ နေတာမြင်လိုက်ရတယ်..။ ကျွန်တော် တံခါးလက်ကိုင်ဘုကြီး ကိုင်ပြီး ငေးကြည့်နေမိတယ်..။ ပြီးတော့ ဇော်ကြီးက ကျွန်တော့်ဗီဒိုကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ရပ်နေတယ်..။ ကျွန်တော် သူဘာကို ဆိုလိုမှန်း နားလည် လိုက်ပြီ..။ ကျွန်တော် သူကြားနိုင်လောက်တဲ့ အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်..
"အေးပါ ဇော်ကြီးရာ…၊ မင်းဖိနပ်နဲ့ ၀တ်စုံကို ငါမင်းဆီကို ပို့ပေးပါ့မယ်…"
ကျွန်တော် အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ ဒီကောင် ကျွန်တော့်ဆီ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းလာတယ်…။ ကျွန်တော် တံခါးဖွင့်ပြီး အပြင်ထွက်လိုက်ရမလား ဒီအတိုင်းနေရမလား စဉ်းစားနေတုန်း ဒီကောင် ကျွန်တော့်ရှေ့ကို ရောက်လာတယ်…။ သေချာတာကတော့ ဒီကောင် ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ပုံစံ ပျောက်ကွယ်သွား တယ်..။ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ပုံစံပါပဲ…။ ကျွန်တော် ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို အမှောင်ထဲမှာ ကြည့်နေရတာ ရုပ်ရှင်တကား ကြည့်နေရသလိုပါပဲ..။ ကျွန်တော် နဖူးပေါ် ကျနေတဲ့ ချွေးတွေကို သုတ်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးလက်ကိုင်ဘုကို လှည့်လိုက်တယ်..
"ဘာဖြစ်တာလဲ သား… တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေနဲ့…"
"ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး… သားအိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေတာပါ…"
အဲ့ဒီည ရေတစ်ခွက်သောက်ပြီး ကျွန်တော် အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဆက်အိပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ဘာအနှောင့်အယှက်မှ မရှိပါဘူး..။ နောက်နေ့ မနက် လင်းလင်းချင်း သူ့ဘောလုံးဝတ်စုံနဲ့ ဖိနပ်ကို သူ့ရဲ့ အုတ်ဂူနားမှာ သွားပြီး မြှပ်ပေးခဲ့ပါတယ်..။ ဒီကောင် ကျေနပ်မှာပါ..။ အဲ့ဒီနေ့ ညနေမှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့ ပထမဆုံး ဘောလုံးပွဲကို ကစားခဲ့ပေမယ့် ကွင်းထဲမှာ ပြေးလွှားနေတဲ့ ဇော်ကြီးရဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကို တွေ့နေရတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ယောင်မိပါတယ်…။
Author Maungssk at 2:57:00 PM
Labels: သရဲ တစ္ဆေ ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ
ဖုန်းမှာ ကီးဘုတ်လန်းလန်းလေးနဲ့သုံးချင်းသူများအတွက် Bagan Keyboard apk Size(6MB)
ဖုန်းဘော်ဒါများအတွက် ပုဂံကီးဘုတ်လန်းလန်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရောင်နှစ်မျိုးလေးဆိုတော့ ကြည့်ရတာအရမ်းလှတယ် ဘာ Code မှဝယ်စရာမလ...
လူသိနည်းသော iPhone လုပ်ဆောင်ချက် (၂၁) ချက်
အင်တာနက်ဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် လူသိနည်းသော iPhone လုပ်ဆောင်ချက် (၂၁) ချက် ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ iPhone သုံးစွဲသ...
ရထားတိုက်ခံ၍ သေဆုံးသွားသူကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရာမှ အလောင်းကောင်က စကားထပြောတဲ့အဖြစ်ကို ခြောက်ခြားဖွယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ မှုခင်းဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်
အချိန်က ၁၉၉၀ ကျော်လောက်အချိန်က . . . ။ ဆောင်းတွင်းဘက်လဲဖြစ် ညဘက်လဲဖြစ်တာနဲ့ သူလဲ ( သူဆိုတာ ကျနော်ပြောတဲ့ မှုခင်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကျနော...
iPhone_iPad တွေ ဘက်ထရီအကုန်မြန်နေရင် ဖုန်းပူလာရင်ဖြေရှင်းနည်း
ပုံမှန်အတိုင်းသုံးနေသူတွေအနေနဲ့ အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလုပ်ကြည့် သိသိသာသာ ဘက်ထရီအား ခံနေတာကို တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ် (၁) Power အရမ်းစားတဲ့ Ap...
Android အတွက် MP4 တွေကို MP3 ပြောင်းတဲ့Video တည်းဖြတ်ဆော့ဝဲ
Youtube တို့Facebook တို့ ကနေ Download ယူထားတဲ့ MP4 သီချင်းတွေကို ဖုန်းထဲမှာပဲ Mp3 ကို ပြောင်းပေးမယ့် Pro Version ဖြစ်ပါတယ် အပိ...
စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာမ 49 ဦးရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ အသံဖိုင် 132 ခု လိုချင်ရင်
စာရေးဆရာ အစုံပါတယ် ဇာဂနာတို ၊ ကိုကိုကြီးတို့အခုနောက်ပိုင်း ဆရာလင်းသိုက် ဟိုးအရင်ကဆို ဦးသုခ ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း ၊ လယ်တွ...